कर्णाली Archives - Nagarik Today
Home	Tags	Posts tagged with "कर्णाली"
कर्णाली – कर्णाली प्रदेशबाट कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षणका लागि मंगलवार पठाइएका ११ वटा सबै नमूनाको रिपोर्ट ‘नेगेटिभ’ आएको छ ।
कोरोना संक्रमणसँग मिल्दोजुल्दा लक्षण देखिएपछि प्रदेशका ५ वटा जिल्लाबाट थ्रोट स्वाब संकलन गरेर राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाइएकोमा ११ वटा रिपोर्ट नेगेटिभ आएको प्रदेश अस्पतालले जनाएको छ ।
प्रदेश अस्पताल सुर्खेतले सोमवारसम्म १५ वटा शंकास्पद व्यक्तिको कोरोना जाँच गरेको छ । अस्पतालका कोरोना रोगका फोकल पर्सन डा. केएन सबैको नतिजा नेगेटिभ आएको बताए ।
‘हालसम्म कर्णालीमा कोरोना आइसकेको पत्ता लागेको छैन,’ उनले भने, ‘अब ५ जनाको नमूना हामीले संकलन गरिसकेका छौं । ती संकलन गरिएका नमूना १–२ दिनमा प्रदेश असपतालमा नै जाँच गर्ने योजना बनाएका छौं ।’
डा. पौडेलले प्रदेशबाटै कोरोना जाँच गर्न शुरू गर्ने मितिबारे यकिन नभइसकेको बताए । ‘हामी सबै साँझ बस्छौं । अहिले मशिन जडान गर्ने कार्य चलिरहेको छ,’ डा. पौडेलले भने, ‘सायद १–२ दिनबाट नै परीक्षण हुन्छ । अब तत्काल कोरोना संक्रमण भएको छ कि छैन भन्ने थाहा हुनेछ ।’